XBMC iri kure kune Android | Kubva kuLinux
XBMC iri kure yeApple
Atr0m | | Applications, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Mushure mekuisa XBMC in the Raspberry Pi mune yangu yapfuura kupinda, ikozvino ndave kuzotsanangura maitiro ekuzvibata. Pane nzira mbiri:
Chekutanga uye chakareruka kuidzora neremote terevhizheni, nekuti izvi terevhizheni yako inofanirwa kutsigira HDMI-CEC. Chechipiri ndechekushandisa zvinoshandiswa zvinogadzirisa yedu XBMC. Ini ndichatsanangura maitiro ekugadzirisa XBMC iri kure ye Android
Isu tichagonesa manejimendi e XBMC, kune izvi isu tinofanira kuenda "tafura" de XBMC uye famba uchienda Sisitimu >> Zvirongwa >> Services >> Webhu server. Iye zvino unofanirwa kuratidza zita rekushandisa uye password yewebhu server, mune yangu ini ndasarudza:
Isu tapedza nechikamu che XBMC. Iye zvino taisa chishandiso XBMC iri kure pane yedu Android uye unomhanya nayo. Nguva yekutanga tichaona izvi:
Isu tinoenda kuZvirongwa uye nekuvhara chiziviso chinoratidza kuti hapana hondo. Isu tinoonekwa pane dema chidzitiro kwatinofanira kuwedzera a hondo kudzvanya kiyi yemenu yeApple yedu.
Tichatora skrini kwatinofanira kuzadzisa iyo data:
Zita reichi chiitiko: Raspberry # Pano unogona kuisa zita raunoda
Host kana IP kero: 192.168.1.200 # Pano tinoratidza iyo IP yedu XBMC
Username: xbmc # Pano tinoisa zita rekushandisa ratakasarudza kare
Pasiwedhi: xbmc # Pano tinoisa password yatakasarudza kare
Kana tangopedza kuwedzera yedu hondo isu tave kugona kubata edu XBMC kubva kune yedu Android.
Pane yangu mbozha pane akati wandei maitirwo pane iyo XBMC iri kure izvo hazvionekwe nekuti zvidiki. Pane mbozhanhare ine hombe skrini kana pahwendefa inotaridzika kunge iri nani. Ndinovimba unozviwana zvichibatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » XBMC iri kure yeApple
Mhoro iyi dzidziso yakanaka kwazvo.
Ndine Media Center ine XBMC ine Gentoo Linux.
Iyo sisitimu yakanaka kwazvo uye ini ndinofarira izvo zvandinoverenga, chete kuti paine imwe sarudzo seremote control
Izvi ndinofunga ndizvo zviri pamutemo kunyorera, asi iniwo ndinoburitsa Yatse uye izere zvakakwana kupfuura iyo yepamutemo vhezheni.Ngatitii iyi application iri kure uye imwe yacho ingave smartremote.
Pindura kune skyark
Chuck daniels akadaro
Ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba uye zvinonakidza. Iwe unogona kuona akateedzana mabhena kubva kune nhare / piritsi, mafirimu mapepa, zvinyorwa, nezvimwe. Haisi yekungochinjika kure kudzora. Iwe unogona kusanganisira zvinyorwa zveiyi mhando mune iyo post Atr0m, zvirokwazvo kuti inopfuura imwe inopinda kuburikidza nemaziso, hahahaha.
Pindura Chuck Daniels
Ini ndinoishandisa chete seremote control, ini handidi imwe. Kunyange zvakadaro, iyo posvo yakanangana nekuisirwa uye kumisikidzwa kupfuura zvainofanira kutaura pamusoro peiyo XBMC iri kure kunyorera. Ndatenda nekutaura !!
Yakanaka kwazvo, asi mubvunzo, zvakafanira here kuisa iyo IP? Ini ndinokuudza izvi nekuti kunetiweki yangu ndinoshandisa DHCP uye ndinoramba kushandisa static IPs.
Ndine XBMC yakaiswa pamafoni, mapiritsi, maPC… ..
Ndiri kuona kuti hauna MAC kero.
pane chirongwa chiri nani, chinonzi yatse, ine kunyange nyeredzi dzakawanda kupfuura iyo yepamutemo iri mu playstore, uye inozvionera wega mudziyo wako
Pindura kuna alejoecheverver0101
Wakamboedza Yatse here? Mushure mekuyedza akati wandei "remotes" ndakagara naYatse.
Ini ndakashandisa yatse gore rapfuura uye ndiyo yakanakisa. Ini ndinobhadharawo iyo premium vhezheni uye ndinogona kutumira mafaera kubva kufoni. Yakakwana kwazvo. Ndinoda kuziva kana iwe pamwe naYatse uchigonawo kudzora penstick ye android? Tora mk809
Super Mario inonzwika mune system ziviso (KDE)